जब म ठूलो हुनेछु…. — Motivatenews.Com
जब म ठूलो हुनेछु….
काठमाडौं – एउटा सानो बच्चा ‘जब म ठूलो हुनेछु, तब यो गर्नेछु, त्यो गर्नेछु र खुशि हुनेछु’ भन्छ । जब ऊ ठूलो हुन्छ त्यसपछि कलेजको पढाई सक्छ अनि, ‘यो गर्नेछु, त्यो गर्नेछु र फेरी खुशी हुनेछु’ भन्छ ।
जब ऊ जागीर पनि खान थाल्छ त्यसपछि, ‘बिहे गर्नेछु, त्यो गर्नेछु र खुशी हुनेछु’ भन्छ । जव बिहे पनि हुन्छ तब, ‘मेरा छोरा छोरीहरुले पढाई सकेपछि, म जब सेवानिवृत हुनेछु, तब यो गर्नेछु त्यो गर्नेछु र खशी हुनेछु’ भन्दछ । जब सेवानिवृत हुन्छ त्यसपछि उसले के देख्छ ? उसले आफ्नै आँखाको सामु जिन्दगी त वितिसकेको भन्ने चाल पाउँछ ।
जीवन कुनै नाटको रिहर्सल होइन । तपाईँ जुकसुकै दर्शन मान्नुहोस्, जिन्दगीमा खेल खेल्ने अवसर एक पटक मात्र पाइन्छ । यो खेलमा अमूल्य जीवन र अमूल्य चिज लगाएको हुन्छ । त्यसैले पनि जिन्दगी व्यर्थमै खेर फालेर तपाईले बाजी जित्नुहुन्न । त्यसको बाजीमा आगामी पुस्ताहरुको जीवन पनि रहेको हुन्छ ।
हामी कहाँ छौं ? कुन समयमा छौँ ? यसको उत्तर अहिले र हामी यहाँ छौं भन्ने हुन्छ । अहिलेलाई अब उत्कृष्ट बनाउँ र बर्तामानको पूर्ण रुपमा पालना गरौँ । यसको मतलव आगामीले भविश्यको योजना बनाउनु आबश्यक छैन भन्ने होइन । यदी हामीले बर्तमानलाई पूर्णरुपले उपयोग गर्यौ भने भविश्यको लागि राम्रो विरुवा रोपिरहेका हुनेछौँ ।
यदी तपाई सकारात्मक दृष्टिकोण निर्माण गर्न चाहानुहुन्छ भने ‘काम तत्कालै गर्नुहोस्’ भन्ने वाक्यलाई अनुशरण गर्नुहोस् र विलम्ब गर्ने बानीलाई रोक्नुहोस् ।